symbian certificate and key request - MYSTERY ZILLION
symbian certificate and key request
August 2011 edited August 2011 in Symbian
symbian ဖုန်းတလုံးအတွက် applications တွေ games တွေ sign လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် hack လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် certificate နဲ့ key တွေကအရေးပါပါတယ်။ အဲဒီ certificate နဲ့ key ကို free ပေးတဲ့ sites တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ sites တွေကတောင်းထားရင် ငါးရက်ကြာလဲ pending ဆယ်ရက်ကြာလဲ pending ဆိုတော့ တောင်းတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေပါဘူး။
အဲဒီလိုအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သူများအတွက် certificate နဲ့ key ကိုဒီနေရာမှာcomment ချန်ပြီးတောင်းနိုင်ပါတယ်။
IMEI နံပါတ် နဲ့ email address ရေးပေးခဲ့ပါ။ cert နဲ့ key ကို ပို့ပေးပါမယ်။
p.s .. မပို့ပေးတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ အောက်က comment များဖတ်ပြီးကိုယ်တိုင်တောင်းကြပါ။
Please help me to get certificate & Key
IMEI - 355383040140 my email is [email protected]
Nice post. I need N70 certificate and key. IMEI is 358080018981464. It's my friend handset. My e-mail is [email protected] Thank.
Thanksalot, I badly need cert and key recently.
pls help me n more...
My IMEI is 356237049687922 and my email address is [email protected]
My phone is Nokia 5800
IMEI is 3548 2804 9361 864
I try foralong time andalot of website but still not
My Phone is Nokia X6-00
IMEI is 352006046208329
please send and help me
I got your mail and cert & key for N 70. Thank for help. Previous I used http://cer.opda.cn/en site. But I cannot use it now. If possible, please let me know your site. My e-mail is [email protected]
IMEI is 355379045397576
help me to get .cer and .key
check your imei.........
IMEI - 358315038134029
IMEI is 357988033354825
sorry for late reply! cert and key files 've been sent to some users. remaining ones can self request at http://www.nokioteca.net/home/forum/.
P.S ,.. SymbianSigned made changes at 23.6.2011. So devcerts generated after 23.6.2011 won'tbcapable of signing all unsigned apps. Here are some apps which canbsigned with new devcert...
-pen c: 0xec41b409
-RomPatcher Lite Version: 0xE0050C10
-ThemeMagic2: 0xe62a9968 + Some more
If you want to hack your phone,try HelloOX v2.03.
@iMz Thanks4ur help.
Diamond Heart wrote:
cert and key files 've been sent to some users. remaining ones can self request at http://www.nokioteca.net/home/forum/. Its working and valid and u have to wait only 1 day. if u have any difficulties, just google it. if still have, pls comment here and i will help u if i can.
23.6.11 နောက်ပိုင်းမှရတဲ့ devcert တွေက app တွေ အကုန်လုံးကို sign လုပ်လို့မရဘူးလို့ရေးထားပါတယ်။ ဖုန်းကို hack ဖို့ဆိုပြန်တော့လဲ သူက helloox 2.03 ကိုပဲ sign လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေ firmware တွေကိုလဲ hack လို့ မရပြန်ဘူး။ အဲဒီတော့ဖုန်းကို မဖြစ်မနေ hack မှရမယ်ဆိုသူတွေ အတွက်တော့လုပ်စရာ၁နည်းပဲကျန်တော့တယ်။ အဲဒါကတော့ custom firmware နဲ့ flash လုပ်တာပါ။ သူ့ရဲ့သဘောကတော့ app တွေအကုန် သွင်းလို့ရအောင် ဖုန်းရဲ့ firmware ကိုပြင်ထားတာပါ။ ကျနော်ကတော့ 5800, 5530, x6 ဖုန်း၁၀လုံးလောက်စမ်းပြီးပါပြီ။ အဆင်ပြေပါတယ်။ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ google ကြည့်ပါ။ post တင်ဖို့ကျတော့လဲ ရေးရမှာနဲနဲများလို့။ အကယ်၍ စိတ်ဝင်စားသူများရှိလို့ post တင်ပေးပါလို့တောင်းမှပဲ post အသစ်တခုအနေနဲ့တင်ပါတော့မယ်။ :P
my ph imei is 357015044105564 my gmail [email protected]
All the phones can be hacked by flashingamodded UDA file.
Thank for your information. I am also interested in custom firmware flashing. Please post it or send to my mail, [email protected] I think the site, http://www.nokioteca.net/home/forum/ is an Italian language site and rather difficult to get cert and key. Please post the step by step procedure at that site.
Thanks alot for the help, I just fondaprogram and I think we don't need cert and key anymore with this program http://www.nokiavnn.com/2011/07/unpackedit-sign-sis-packages-via.html .
plz help me to get certificate and keys.
i'm using nokia X6 8G.
my IMEI is 354316043852252.
My phone is nokia X-6 (16GB)
IMEI - 353422046158290
My gmail acc is [email protected]
မွ်ေ၀ေပးလို႕ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။
register လုပ္ျပီးရင္ ဖုန္းေတြ ဘယ္ႏွစ္လံုး လုပ္လုပ္ လုပ္လို႕ရသလား ။
မူရင္းဆိုဒ္က အီတလီ ဆိုေတာ့ ဘာမွ နားမလည္ဘူးေလ ။
အဂၤလိပ္လို ေရးထားတာကို ၾကည့္မွ နဲနဲ ေရးေတးေတး သေဘာေပါက္တယ္ ။
အေသးစိတ္ကို နဲနဲ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။
ဘာပဲေျပာေျပာ OPDA ကို သတိ ရမိတယ္ ။
အခုအခ်ိန္မွာ ONLINE ကေန သူအလွဴခံေနတာကို ျမန္မာျပည္ကေန ဘယ္လိုထည့္၀င္ ေပးလို႕ရမလဲ ။
ေငြလႊဲျပီးရင္ေရာ .CER နဲ႕ .KEY က က်လာပါ့မလား ။
အဲဒီေငြကလဲ ဖုန္းတလံုးအတြက္ပဲ ရတာလား သိခ်င္ပါတယ္ ။
i'm using Nokia N8 ပါ
my IMEI is 356237046645014
my IMEI is 355964043172038
ကျွန်တော့်ဖုန်းက nokia E71 ပါ။
certification error ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ်
အဲ့တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း သိချင်ပါတယ်
အကိုပေးတဲ့ key တွေကို ဘယ်လိုသုံးရမှာလည်း သိချင်ပါတယ်
imei : 351940032901060 ပါ
မေးလ်က [email protected] ပါ
ပြီးတော့ firmware က ver : 110.07.127
@ Nokia E71-1(253.03) ပါ
ထပ်မြှင့်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း နည်းလမ်းများ သိချင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ............
please help me to get certificate and keys
i use nokia 5230
thanks alot bro............
nokia5800 XpressMusic ပါ ခင္ဗ် . . .imei က 354182028425708 ပါ [email protected]ပါ cer+key လိုခ်င္ပါ တယ္ ခင္ဗ်
My phone is Sony U8i
IMEI - 012305000399146
Nokia N8 par